चौथो पटक नारायणहिटीबाट श्रीपेच चोर्ने व्यक्ति पक्राउ, को हुन् उनि ? — Sanchar Kendra
चौथो पटक नारायणहिटीबाट श्रीपेच चोर्ने व्यक्ति पक्राउ, को हुन् उनि ?
काठमाडौं । रुकुम पश्चिमका २५ वर्षीय खेमबहादुर घर्ती नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबाट श्रीपेच चोर्ने चौथो प्रयासमा पक्राउ परेको खुलेको छ । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा उनले यसअघि तीन पटक श्रीपेच निकाल्ने प्रयास गरेको खुलेको हो ।
दरबारमार्गका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रामेश्वर पौडेलका अनुसार घर्तीविरुद्ध अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘उनको मानसिक अवस्था ठिक नभएकाले अरु कसुर पुष्टि गर्न गाह्रो हुने हुँदा अभद्र व्यवहारको कसुरमा म्याद थप गरेका हौं’ पौडेलले भने, ‘हाल अनुसन्धानका लागि ५ दिन म्याद लिएका छौं ।’